ViaCoin စျေး - အွန်လိုင်း VIA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ViaCoin (VIA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ViaCoin (VIA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ViaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $4 953 400.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ViaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ViaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ViaCoinVIA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.235ViaCoinVIA သို့ ယူရိုEUR€0.198ViaCoinVIA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.179ViaCoinVIA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.214ViaCoinVIA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.11ViaCoinVIA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.47ViaCoinVIA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.2ViaCoinVIA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.873ViaCoinVIA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.312ViaCoinVIA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.325ViaCoinVIA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.26ViaCoinVIA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.82ViaCoinVIA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.26ViaCoinVIA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹17.6ViaCoinVIA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.39.6ViaCoinVIA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.321ViaCoinVIA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.352ViaCoinVIA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.31ViaCoinVIA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.63ViaCoinVIA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥24.76ViaCoinVIA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩278.2ViaCoinVIA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦89.34ViaCoinVIA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽17.23ViaCoinVIA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.51
ViaCoinVIA သို့ BitcoinBTC0.00002 ViaCoinVIA သို့ EthereumETH0.000591 ViaCoinVIA သို့ LitecoinLTC0.00391 ViaCoinVIA သို့ DigitalCashDASH0.00231 ViaCoinVIA သို့ MoneroXMR0.00251 ViaCoinVIA သို့ NxtNXT16.64 ViaCoinVIA သို့ Ethereum ClassicETC0.0328 ViaCoinVIA သို့ DogecoinDOGE66.52 ViaCoinVIA သို့ ZCashZEC0.00237 ViaCoinVIA သို့ BitsharesBTS8.96 ViaCoinVIA သို့ DigiByteDGB8.63 ViaCoinVIA သို့ RippleXRP0.763 ViaCoinVIA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00789 ViaCoinVIA သို့ PeerCoinPPC0.807 ViaCoinVIA သို့ CraigsCoinCRAIG104.26 ViaCoinVIA သို့ BitstakeXBS9.76 ViaCoinVIA သို့ PayCoinXPY3.99 ViaCoinVIA သို့ ProsperCoinPRC28.71 ViaCoinVIA သို့ YbCoinYBC0.000123 ViaCoinVIA သို့ DarkKushDANK73.37 ViaCoinVIA သို့ GiveCoinGIVE495.25 ViaCoinVIA သို့ KoboCoinKOBO51.35 ViaCoinVIA သို့ DarkTokenDT0.216 ViaCoinVIA သို့ CETUS CoinCETI660.31